पर्यटन बोर्डले बजेट बनाउँदा सरोकारवाला खोजेन ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
पर्यटन बोर्डले बजेट बनाउँदा सरोकारवाला खोजेन !
नेपाल पर्यटन बोर्डले भर्खरै सार्बजनिक गरेको बजेट ०७२ र ०७३ राम्रोसँग अध्ययन गरें । त्यहाँ सरसर्ती हेर्दा खासमा यो वजेट तयार गर्दा उहाँहरुले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपुर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र हो र टुरिजम बोर्ड भनेको पिपिपीको अवधारणामा स्थापित भएको सँस्था हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु भएन । बजेट बनाउँदा होस्, वा कार्यक्रम बनाउँदा होस् सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसंग सल्लाह परामर्श लिएर, योजनाहरु आह्वान गरेर मात्र बजेट बनाउनुपर्ने थियो । यो बजेट बनाउने कुरामा निजी क्षेत्रसँग केही सल्लाह गरिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा के कुरामा कति बजेट आवश्यक छ भन्ने कुराको परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया नगरिकन बजेट आउनु भनेको बजेट असफल हुनु हो । यो बजेट भोली कार्यान्वयनमा नि जान नसक्ने संकेत हो । यो बजेटले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी पनि ढुक्क भए हुन्छ ।
पर्यटनलाई निरुत्साहित बनाउने बजेट
पर्यटन नै भनेर बजेट केहीमा पनि छुट्याइएको छैन । वास्तवमा पर्यटन भित्रको सांस्कृतिक सम्पदा भनेर लाखौं करोडौं रुपियाँ छुट्याईएको छ । मठ मन्दिर बनाउने, गुम्बा बनाउने, पार्क बनाउने । जुन पर्यटन क्षेत्रमा प्रवद्र्धनको लागि बिकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ठाउँमा बजेट नछुट्याएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने ठाउँमा बजेट छुट्याईएको छ ।
जस्तै धादिङको बजेट एक करोड १० लाख ५० हजार रुपियाँ छुट्याईएको छ । धादिङको रुबिभ्याली ट्रेकिङ ट्रेललाई स्थापित गराउनको लागि बिगत एक बर्ष अगाडिदेखि हामीले सर्वे ग¥यौं, पुर्वधार निर्माण ग¥यौँ, बिभिन्न संघ संस्था (सामर्थ, डिएफआईडी, एनएनडिपी) संग मिलेर त्यो किसिमको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि हामी जसरी लागिरहेका छौं । १७–१८ वटा आईटिनरी बनाएर हामी लागिरहेका छौं । त्यो रुटमा बजेट नहालिकन बिभिन्न गुम्बा, मठ मन्दिरमा बजेट हालिएको छ । त्यहाँको सरोकार वालाहरुसँग छलफल गरेर कति बजेट आवश्यक छ भनेर सल्लाह सुझाव लिनुपथ्र्यो । यो बजेटले पर्यटनलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
बोर्डमा संस्थागत नियुक्तिको खाँचो
टुरिजम बोर्डमा वास्तवमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिक नियुक्ती लिएर जाने हाम्रो कल्चर नै हो । त्यहाँ उहाँहरुको इक्छाशक्ति, जिम्मेवारीबोध, सक्रियताले नै यस्ता समस्या समाधान हुनु पर्ने हो । सञ्चालक समिति भन्दा ठुलो त कर्मचारी हुँदैन । कर्मचारीलाई दोष देखाएर मात्र पन्छिन मिल्दैन ।
पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिबाट व्यवसायिक रुपमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने प्रक्रिया गलत थियो भनेर हिजो पनि व्यवसायिहरुले आवाज उठाकै हो । जेटीसिसीको आन्दोलनको क्रममा महिनौँ आन्दोलन भयो । त्यो बेलामा उठाईएको योजना मध्ये सबैभन्दा सशक्त ऐजेन्डा भनेकै नेपाल टुरिजम बोर्डको संरचनाको पुन संरचना हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो पुनसंरचना कसरी गर्ने भन्दा संस्थागत प्रतिनिधी हुनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक नियुक्ति होईन । त्यो संस्थागत नियुक्ति भनेको टुरिजम क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिको रुपमा पठाऔं भनेका थियौं । जो जान्छन ति व्यक्तिहरु सँस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ र व्यवसायी प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उसले गर्ने । हरेक कार्यहरु व्यवसायीबाट नै जाने भएकाले त्यो अलि उपयोगि हुन्छ भन्ने हिसावले हामीले कुरा उठाएका हौं ।
टिम्स रकम र टान–बोर्डको सवाल
पर्यटन बोर्ड र टानको बीचमा टिम्स (ट्रेकर इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) व्यक्तिगतबाट आउने २० डलर र गु्रप (समुह) एजेन्सिबाट जाने १० डलर, यो रकमको ३० प्रतिशत टानले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न जिम्मा पाउँछ ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डले पाउँछ ३० प्रतिशत संयुक्त खातामा रहन्छ र १० प्रतिशत मजदुर कोषमा बस्छ । यी पैसा अहिले टुरिजम बोर्डमा अड्किएर बसेको छ । टानले पाउनु पर्ने रकम अघिल्ला कार्यसमितिको बदमासी देखाउँदै बोर्ड बाटै अड्काइएको छ । हामीले अनुनय बिनय गरेपछि हुदहुदमा परेका मजदुरका परिवारलाई दिने क्षेतिपुर्ति व्यक्तिगत जमानी बसेर तलवितल परे÷उद्देश्य विपरित गए हामीले व्यक्तिगत रुपमा तिर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेर रकम ल्याएर समस्या समाधान गरेका छौं ।
टुरिजम बोर्डले टानलाई टिम्स्को उद्देश्य भन्दा फरक ठाउँमा खर्च भएको हुँदा बेरुजु निस्कियो भनेर आरोप लगाउँदै बजेट रोकेको छ । टानले आन्तरिक लेखा परिक्षण पनि गरेर देखाईसकेको छ । आलेपा मलेपा पनि गरिसकेको छ । हिसाव किताब बुझाएपछि अरु पैसा पनि फछ्र्यौट गर्छौँ भनिएको थियो, अहिलेसम्म भएको छैन । एउटा पाट्नरशिपको हिसाबले टुरिजम बोर्डको चाहीँ आलेप मलेप भएको छ कि छैन ? टुरिजम बोर्डले लिने चाहीँ ३० प्रतिशत पैसा कहाँ कहाँ खर्च भएको छ, त्यो हामीलाई जानकारी दिईएको छैन । यस्तो कुराको जानकारी हामीले पाउने कि नपाउने ? यस्ता यस्ता पक्षहरु छन् टुरिजम बोर्डमा ।
टुरिजम बोर्डसंगको समस्याको समाधान गर्ने क्रममा टानका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल एकदमै खट्नु भयो । अध्यक्षसँग म स्वयं एकदम निकट भएर अभियानमा सँगसँगै छु । टानमा गईसकेपछि कयौं बिहान ब्रेकफास्ट पनि मन्त्री ज्यूसँगै बसेर खानु भयो । टुरिजम बोर्डमा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म धाउनुभयो । नेताहरुको घरघरमा जानुभयो । तर हाम्रो अध्यक्षले मन्त्री ज्यूले गर्दिनुहुन्छ, बोर्डमा हाम्रै साथिहरुको प्रतिनिधित्व छ । एक हप्ता कुरौं, दुई हप्ता कुरौं भन्नु भयो । यी कुरा मन्त्रालय र बोर्डले नसुन्ने अवस्था देखेपछि हाम्रा मागलाई अर्को ढंगले जानुपर्छ भनेर पनि जान खोज्यौँ, तर अध्यक्ष ज्यूले हैन कुरौं एक/दुई हप्ता कुरौं, मलाई मेरो पार्टी र साथीहरुप्रति पुर्ण विश्वास छ । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री अनि बोर्डमा पनि कुरा सुन्ने साथिहरु पुग्नुभएको छ भनेर भर पर्नु भएको थियो । उहाँको प्रयत्न खेर गयो । आफ्नै साथिभाईबाट उहाँलाई सहयोग भएन । उहाँहरुको आन्तरिक समस्याले यसो भएको हुनसक्छ । नभए सबै आफ्नै भएको बेला समाधान किन हुँदैन त ! हामीलाई शंका बढ्दै गएको छ ।
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई नै सुम्पिए पनि हामीले बोर्डका पदाधिकारीसंग बसेर धेरै पटक बहसहरु ग¥यौँ । धेरै पटक छलफल ग¥यौँ । ३० प्रतिशतको ज्वाईन्ट खातामा कम्तिमा १७–१८ करोड पैसा छ । टुरिजम बोर्डमा त्यो रकम किन रोकेर राख्ने ? ठिक छ टानको जिम्मामा परेको टानले बेरुजु निकाल्यो टिम्सको उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर खर्च ग¥यो, त्यो त टानको ३० प्रतिशत न हो । अरु रकम त रोकिनुपर्ने कुरा आउँदैन थ्यो । जुन बेला पर्यटनलाई साँच्चिकै आवश्यकता छ, अहिलेको यो क्राइसिस् अवस्थामा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न, यसलाई हिजोकै अवस्थामा लैजान ठुलो रकम आवश्यकता छ । यो बेला गर्नै नसकिने भन्ने अरु केही कारण देख्दिन म । टुरिजम बोर्डमा जाने साथिहरुले यत्ति कुराको समाधान गर्ने हो भने पर्यटनमा निकै उत्साह आउन सक्छ ।
तर अब त सरकार परिवर्तन भएको छ, ति साथिहरुलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । अबको नयाँ सरकारले र नयाँ पर्यटनमन्त्रीले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरौं, बिश्वस्त त हामी अझै पनि छैनौं ।
(लेखक गुरुङ टानका प्रथप उपाध्यक्ष हुन् )
प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०७३
काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
बुद्धिष्ट पर्यटक प्रवद्र्धन गर्नेबारे नाट्टा र एब्टोबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल एशोसियशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स नेपाल (नाट्टा) र एशोसियशन अफ वुद्धिष्ट टुर्स
अवको पर्यटकीय गन्तव्य ‘पृथ्वीको लागि उपहार’ क्षेत्र
पूर्व नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य तीनजुरे, मिल्के, गुफा, पाथीभरा क्षेत्र प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर भएपनि पर्यटकीय
दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको पर्यटक बसबाट रक्तचन्दन तस्करी, दुई पक्राउ
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालिमाटीले ११ किलो रक्तचन्दन र विभिन्न सामग्रीसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको